अर्डिनोका लागि पानी पम्प: सबै कुरा तपाईंलाई थाहा हुनु पर्छ नि: शुल्क हार्डवेयर
निश्चित रूपमा धेरै अवसरहरूमा तपाईंलाई आवश्यक छ तरल पदार्थ ह्यान्डल गर्नुहोस् तपाईको DIY प्रोजेक्टहरूमा Arduino को साथ। यो सम्भव बनाउनको लागि, निर्मातासँग काम गर्न धेरै उत्पादहरू र उपकरणहरू छन्। पहिले नै विगतमा हामी प्रख्यात देखाउँदछौं फ्लोमीटर, जससँग तपाईं तरलको प्रवाह नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ जुन उनीहरूको माध्यमबाट सरल पार भयो। अब यो पानी पम्प को बारी छ ...
ती प्रयोग गर्दै फ्लोमीटर तपाईं यसलाई नियन्त्रण गर्न पाइपको माध्यमबाट प्रवाह हुने तरलताको मात्रा मापन गर्न सक्नुहुनेछ। यी तत्वहरू र अन्यहरूको साथ एक साधारण सर्किटमा सबैलाई धन्यवाद मिल्दो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणहरू Arduino संग। अब तपाइँलाई तरलहरू सार्ने सम्भावना दिन, ट्यांकहरू भर्न / खाली गर्ने, सिँचाइ प्रणाली निर्माण गर्ने, इत्यादि दिनको लागि अलि बढि समय आइसकेको छ।
1 पानी पम्प भनेको के हो?
2 मूल्य र कहाँ किन्न
3 कसरी पानी पम्प काम गर्दछ
4 अर्डिनोको साथ पानी पम्प एकीकृत गर्नुहोस्
पानी पम्प भनेको के हो?
वास्तवमा नाम पानी पम्प यो उपयुक्त छैन किनकि यसले पानी बाहेक अरू तरल पदार्थहरूसँग पनि काम गर्न सक्दछ। जे भए पनि, पानी पम्प एक उपकरण हो जुन गतिज उर्जा प्रयोग गरेर तरलको बहाव उत्पादन गर्न सक्षम छ। त्यसकारण यससँग केही आधारभूत तत्त्वहरू छन्:
प्रवेश: जहाँ तरल ग्रहण गरिन्छ।
मोटर + प्रोपेलर: इन्याकेटबाट पानी निकाल्छ र यसलाई आउटलेट मार्फत पठाउँदछ कि गतिज उर्जा उत्पादन गर्ने जिम्मामा एक।
Salida: यो इनटेक हो जसको माध्यमबाट पानी पम्पको शक्तिले चलाएको तरल बाहिर निस्कन्छ।
यी हाइड्रोलिक बम तिनीहरू प्रोजेक्टहरू र उपकरणहरूको धेरै संख्यामा प्रयोग गरिन्छ। उद्योग देखि, पानी वितरण मशीनहरु, स्वत: सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर सिंचाई, आपूर्ति प्रणाली, उपचार प्लान्ट, आदि। यस कारणका लागि, त्यहाँ बजारमा धेरै संख्याका मोडेलहरू छन्, विभिन्न शक्ति र क्षमताहरू (प्रति घण्टा वा यस्तै लिटरमा मापन गरिएको)। सानोदेखि ठूलोसम्म, फोहोर पानी वा सफा पानीको लागि, गहिरो वा सतह, आदि।
को लागी विशेषताहरु तपाईंले हेर्नु पर्ने भनेको यी हुन्:
क्षमता: प्रति घण्टा लिटर (l / h) मा मापन, लिटर प्रति मिनेट (l / मिनेट), आदि। यो पानीको मात्रा हो जुन यसले समय प्रति इकाई निकाल्न सक्छ।
उपयोगी जीवनको घण्टा- समयको मात्रा मापन गर्दछ जुन समस्या बिना निरन्तर चल्दछ। पुरानो राम्रो। तिनीहरू सामान्यतया 500 घण्टा, 3000 घण्टा, 30.000 घण्टा, आदि हुन्।
हल्ला: डीबी मा नापिएको, यो शोरको मात्रा हो जुन यसले सञ्चालनमा गर्दछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छैन, जबसम्म तपाईं यो एकदम शान्त हुन चाहानुहुन्न। यस्तो अवस्थामा, <30dB का साथ खोज्नुहोस्।
संरक्षण: धेरैसँग आईपी protection68 संरक्षण छ (इलेक्ट्रोनिक्स वाटरप्रूफ गरिएको छ), जसको मतलब हो कि तिनीहरू डूबाउन सकिन्छ (उभयचर प्रकार), त्यसैले तिनीहरू समस्या बिना तरलको अन्तर्गत हुन सक्छन्। अन्य, अर्कोतर्फ, सतह हो र मात्र इनलेट ट्यूब डुब्न सकिन्छ जहाँ यो पानी अवशोषित गर्दछ। यदि तिनीहरू सबमर्सिबल छैनन् र तपाईंले तरलको मुनि राख्नुभयो भने यो बिग्रन्छ वा सर्ट सर्किट हुन्छ, त्यसैले यसमा ध्यान दिनुहोस्।
स्थिर लिफ्ट: यो सामान्यतया मिटर मा मापन गरिएको छ, यो उचाई छ जहाँ तरल प्रबल गर्न सक्छन्। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईले तरल पदार्थ बढाउनको लागि अधिक उचाईमा ल्याउन वा इनारबाट पानी निकाल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने। यो २ मिटर, m मीटर,2मिटर आदि हुन सक्छ।
उपभोग- यो वाट मा मापन गरिएको छ (डब्ल्यू) र तिनीहरूले कार्य गर्न चाहिने उर्जाको मात्रा संकेत गर्दछ। धेरै जसो केसहरूमा तिनीहरू पर्याप्त कुशल छन्, उनीहरूसँग 3.8..XNUMX डब्ल्यू बढी वा कम (सानाको लागि) को सेवन हुन सक्छ।
तरलहरू स्वीकार गरियो: जस्तो मैले भनें, तिनीहरू धेरै प्रकारका तरल पदार्थहरू स्वीकार गर्छन्, यद्यपि सबै छैन। यदि तपाईं पक्का हुनुहुन्छ कि तपाईंले किन्नुभएको पम्पले तपाईंले चलाउने तरलको साथ काम गर्न सक्दछ, यो निर्माताको विवरण जाँच गर्नुहोस्। तिनीहरू सामान्यतया पानी, तेल, एसिड, क्षारीय समाधान, ईन्धन, इत्यादिसँग राम्रोसँग काम गर्न सक्दछन्।
मोटरको प्रकार: यी सामान्यतया DC इलेक्ट्रिक मोटर्स हुन्। Brushless प्रकार (ब्रश बिना) विशेष गरी राम्रो र टिकाऊ हो। इन्जिन शक्तिमा निर्भर गर्दै तपाईंसँग अधिक वा कम क्षमता र स्थिर उचाइको साथ पम्प हुनेछ।
प्रोपेलर प्रकार: मोटरको शाफ्टमा जोडिएको प्रोपेलर छ, जो तरल निकाल्न केन्द्रापसारक ऊर्जा उत्पन्न गर्दछ। यी बिभिन्न प्रकारका हुनसक्दछन्, र पम्पले यसमा निर्भर गर्दछ गति र प्रवाह। तीनिहरु पनि थ्रीडी प्रिन्टि different प्रयोग गरेर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ फरक आकारका आधारमा। म तपाईंलाई यसको बारे मा निम्नलिखित रोचक भिडियो छोड्छु:
मा अधिक जानकारी थिंगिभर्सि
कैलिबर: इनलेट र आउटलेट सकेटको एक विशिष्ट गेज छ। यो महत्त्वपूर्ण छ जब यो तपाईंले प्रयोग गर्न लाग्नु भएको पाइपहरूसँग उपयुक्त छ। जे होस्, तपाई बिभिन्न फिटिंग गेजका लागि एडेप्टरहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
परिधीय बनाम केन्द्रापसारक (रेडियल बनाम अक्षीय): जहाँ अन्य प्रकारहरू छन्, यी दुई प्राय: यी घरेलू अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू प्रोपेलर कसरी ब्लेडको साथ स्थित हुन्छन् भन्नेमा निर्भर गर्दछ, तरल पदार्थ केन्द्रित वा परिधीय रूपमा। (थप जानकारीको लागि "कसरी पानी पम्पले काम गर्दछ" भन्ने खण्ड हेर्नुहोस्)
तर प्रकार र प्रदर्शनको पर्वाह नगरी, सधैं विद्युतीय नियन्त्रण छन्। गतिलाई शक्ति उत्पन्न गर्न प्रोपेलरहरू ड्राइभ गर्ने मोटरलाई पोषण दिएर, तिनीहरूको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तसर्थ, सानो पम्पहरू (वा रिले वा MOSFETs को साथ ठूलाहरू) अर्डिनोको साथ हाइड्रोलिक प्रणालीहरूलाई स्वचालित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसको अनुप्रयोगहरूको लागि, मैले पहिले नै केहि उल्लेख गरेको छु। तर सोच्नुहोस् कि तपाई अरुडिनोको साथ आफ्नै सरल प्रोजेक्ट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, म यहाँ छु कुनै विचारहरु:
वास्तविक उपचार प्लान्टहरूले कसरी काम गर्दछन् भनेर जान्नको लागि एउटा घर बनाइएको मिनी-स्क्रबर।
एक बिल्ज प्रणाली जसले सेन्सर मार्फत पानी पत्ता लगाउँदछ र पानी पम्प सक्रिय गर्दछ।
एक टाइमरको साथ एक स्वचालित प्लान्ट पानी प्रणाली।
तरलताको स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण। फ्लुइड मिक्सि systems प्रणाली, आदि।
मूल्य र कहाँ किन्न
पानी पम्प एक साधारण उपकरण हो, योसँग धेरै रहस्य छैन। साथै, -3 10-XNUMX को लागी तपाइँ सक्नुहुन्छ खरिद गर्नुहोस् केही सरल इलेक्ट्रोनिक पम्पहरू जुन अर्डिनोका लागि अवस्थित छन्, यद्यपि त्यहाँ महँगो व्यक्तिहरू छन् यदि तपाईं उच्च शक्तिहरू चाहानुहुन्छ भने। उदाहरण को लागी, तपाई संग यी हुन सक्छ:
२v० पनडुब्बी पम्प २ 12० l / h क्षमता र m मीटर स्थिर लिफ्टको साथ
१० l / मिनेट क्षमता र m मीटर स्थिर लिफ्टको साथ १२v UEETEK पनडुब्बी पम्प
२m०l / h पनडुब्बी तेल र पानी मिनी पम्प, m मीटर स्थिर लिफ्टको साथ।
V मीटर स्थिर उचाई र l०० l / h को साथ १२V पनडुब्बी पानी पम्प।
२V भी पनडुब्बी पम्प स्थिर उचाईको साथ m मीटर र १24०० एल / घन्टा।
220 / 240v प्लगमको 1500l / h को क्षमता र स्थिर लिफ्टको 2m को साथ पनडुब्बी पम्प।
मिनी पनडुब्बी पम्प २--2.5-vv -6०-१२० एल / घन्टा
M.m मीटर लिफ्ट र .3.5. l l / मिनेट क्षमताको साथ अल्ट्रा-शान्त मिनी पम्प
JOYKK माइक्रो पानी पम्प २-2.5--6VV 80०-११२० / h को क्षमताको
कसरी पानी पम्प काम गर्दछ
पानी पम्प यो एक धेरै साधारण तरीकाले काम गर्दछ। यसमा मोटरसँग जोडिएको प्रोपेलर छ, जसले उर्जालाई ब्ल्याडमा पार गर्छ तर यसबाट इनलेटबाट आउटलेटमा प्रोपेल हुन्छ।
ती मध्ये अक्षीय प्रकार, पानी पम्प कक्षमा प्रवेश गर्दछ जहाँ प्रोपेलर केन्द्रको बीचमा अवस्थित हुन्छ, यसको गतिज उर्जा बढाउँदै जान्छ, जुन त्यस तत्वमा जान्छ जुन द्रुत गतिमा घुम्दै छ। यो त्यसपछि बाहिर निस्कन को माध्यमबाट चेंबर tangenally बाहिर निस्किन्छ।
En रेडियल, ब्लेडहरू इनलेट खोल्ने अगाडि घुमाउँदछन् र पानीलाई आउटलेटमा टेढो पार्दछ जस्तो कि यो पानीको पा were्ग्रा हो। यस प्रकारले उनीहरूले यस पानीलाई पानी सार्नेछन।
अर्डिनोको साथ पानी पम्प एकीकृत गर्नुहोस्
तपाईंलाई थाहा छ, तपाईं पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ एक रिले यदि तपाईंलाई यसको आवश्यक छ भने। तर यहाँ, पानी पम्प Ardino संग एकीकृत गर्न मैले एक MOSFET छनौट गरे। विशेष गरी एक मोड्युल IRF520N। र जडानको लागि, सत्य यो हो कि यो एकदम सरल छ, सरल यी सिफारिसहरूको पालना गर्नुहोस्:
SIG आईआरएफ 520२० एन मोड्युल एक अर्डिनो पिनमा जडान हुनेछ, उदाहरणका लागि D9। तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि यदि तपाईंले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाईंले कार्य गर्न स्केच कोड पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
Vcc र GND IRF520N मोड्युलको तपाईं तिनीहरूलाई 5v र तपाईंको Ardino बोर्डको GND मा जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
U + र U- यो जहाँ तपाईं पानी पम्प बाट दुई तारहरु कनेक्ट हुनेछ। यदि यो आन्तरिक क्षतिपूर्ति छैन भने, यो एक आगमनात्मक लोड हो, त्यसैले दुवै केबुलहरूका बीचमा फ्लाईब्याक डायोड प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
विन र GND यो जहाँ तपाईं ब्याट्रीहरू जुन तपाईं पानी पम्पलाई बाह्य रूपमा, वा ब्याट्री, पावर सप्लाई वा जे पनि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ पावरमा प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
त्यस पछि सबै एकत्रित हुन्छ र सुरु गर्न तयार हुन्छ स्केच स्रोत कोड। यो गर्न, भित्र Arduino IDE तपाईंले निम्न जस्तै समान प्रोग्राम सिर्जना गर्नुपर्नेछ:
यस्तो अवस्थामा पम्प अन गर्नुहोस् र उनको 10 मिनेट को लागी काम गर्दछ। तर तपाईं अधिक कोड, सेन्सरहरू, आदि थप्न सक्नुहुन्छ, र यसलाई आर्द्रता सेन्सरको आउटपुटमा आधारित, टाइमरहरूको प्रयोग गरेर आदि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू » अर्डिनोका लागि पानी पम्प: सबै कुरा तपाईंलाई थाहा हुनु पर्छ
१n1००4007: यस डायोडको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा